Madaxweynaha Turkiga ayaa walaac xoogan ka muujiyay Abaarta soo noqnoqotay ee ka jirta Dalkeenna Soomaaliya. | kowtharmedia.com
Home WARAR Madaxweynaha Turkiga ayaa walaac xoogan ka muujiyay Abaarta soo noqnoqotay ee ka jirta Dalkeenna Soomaaliya.
Madaxweynaha Turkiga ayaa walaac xoogan ka muujiyay Abaarta soo noqnoqotay ee ka jirta Dalkeenna Soomaaliya.
Mar 05, 2017WARAR
Madaxweynaha Dowladda Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan‏ ayaa waxuu sheegay in taageero bini’aadannimo u fidin doonaan Kumanaanka Ruux ee abaarahu ay ku saameeyeen qeybo ka mid ah Gobolada Dalka Soomaaliya.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan‏ ayaa bartiisa Twitter-ka waxuu ku soo daabacay in Malaayiin Ruux oo ku sugan Dalalka Soomaaliya, Ethiopia, Kenya and South Sudan, and Yemen ay wajahayaan xaalad nololeed.
Waxuu sheegay in ay u baahan yihiin in la gaarsiiyo gargaar bini’aadannimo.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan waxuu tilmaamay in marnaba aan indhaha laga laaban karin baaqyada ka imaanaya Aduunka oo gurmadka loou raadinayo Dadkaasi ay saameynta ku yeelatay abaaraha.
Sikastaba, hadalka Madaxweynaha Dowladda Turkiga ayaa waxuu imaanayaa xili abaaro xoogan ay ku dhufteen Degaano iyo Degmooyin dhaca Koonfurta iyo Bartamaha Dalka Soomaaliya.
Previous PostWasiir iyo Masuuliyiin kale oo katirsan Maamulka Koonfur Galbeed ee Itoobiyan isku sheega Amaison Xabsi dhiggeen! Next PostXildhibaan Ka tirsan M_Somaliland ayaa shalay u hanjabay Madaxweynaha Soomaaliya Kadibna Asagii sidii Ey oo kale loo garaacay!!